यस्तो छ दुई रुकुमका दुई तालको कथा | Coverkhabar
यस्तो छ दुई रुकुमका दुई तालको कथा
कभर खबर Follow on Twitter ४ माघ २०७७, आईतवार २१:०७
कुनै बेला पर्यटकीय सुन्दरताले भरिपुर्ण जिल्लाको रुपमा रुकुम अहिले दुइ टुक्रा परेर रुकुम पूर्व र रुकुम पश्चिम भएको छ । एउटै जिल्लालाई दुई भागमा विभाजन गरेपनि यस क्षेत्रका पर्यटकीय सुन्दरतामा न कुनै कमी आएको छ न यसले जिल्लाको सौन्दर्यतालाई विगारेको छ । वरु दुई वटै जिल्लामा दुइवटा ठुला तालहरु रहेर पर्यटकीय गन्तव्यको सुनिश्तिा गरिएको छ । आज यसको बारेमा हामी चर्चा गर्दैछौ ।
रुकुम पुर्वमा पर्ने यो कमल ताल रुकुमकोटमा अवस्थित रहेको छ । सिस्ने गाउँपालिका वडा नं. ५ मा रहेको यस ताल मध्यपहाडी राजमार्गको छेउमै रहेको छ । यस तालमा पहिले देखि नै कमल फुल्ने भएकोले यसलाई कमलताल नामाकरण गरिएको स्थानीयहरु बताउछन् ।
यस तालमा बैशाख जेठ महिनामा कमल फुल्ने भएकोले पनि यहाँ यस तालको सौन्दर्यतालाई हेर्न छिमेकी जिल्ला रुकुम पश्चिम, वागलुङ्ग, सल्यान, रोल्पा लगायतका जिल्लाहरुबाट मानिसहरु आउने गर्दछन् । कमल फुलेको समयमा यस ताल अति सुन्दर देखिने भएकोले पनि यहाँ मानिसहरु आउने गरेको सिस्ने गाउपालिकाकी अध्यक्ष कुमारी बरालले जानकारी दिइन् । अहिले कमल ताल वरी परि विभिन्न संरचनाहरु निर्माण भइरहेकोले पनि यसको सुन्दरता अझै वढेको देख्न सकिन्छ ।
कमल फुलिसकेपछि यहाँ कमलको जरा निकालेर विक्रि समेत गरिन्छ । कमलको जराको अचार तथा तरकारी तथा जुुस बनाएर खाएमा पेट सम्वन्धी विभन्न रोगहरु सन्चो हुने जनविश्वास रहेकोले पनि यसको खरिद विक्रि हुने गर्दछ ।
कमलको जराको १ केजी कमलको मुल्य ४ सय रुपैया पर्ने गर्दछ ।
उक्त कमल टिप्न सिस्ने गाउपालिकाले ठेक्का मार्फत सुचना निकाल्ने गर्दछ । स्थानीय सरकार नबन्दै समिति मार्फत टिप्ने गरेता पनि स्थानीय सरकार बनेदेखि सरकाले आफ्नो कब्जामा लिई हेरदेख देखि लियर बिकास निर्माणको काम भैरहेको गाउपालिका अध्यक्ष बरालले बताईन ।
रुकुम पश्चिम दोस्रो पर्यटकीय स्थलको रुपमा परिचित स्यार्पुताल बाफिकोट गाउपालिका वडा नम्बर ३ र ५ को बिचमा फैलियको छ ्र सदरमुकाम मुसिकोट खलंगाबाट ५ कोष टाढा पर्ने उक्त ताल त्रिकोणात्मक रुपमा फैलियको देख्न सकिन्छ । बर्षायाममा तालमा पानी वढेर तालमा पानी माथी माथी सम्म आउने र हिउदमा भने पानीको सतह घटेने गरको देखिन्छ ।
यस तालमा पानीको मुहान नभएकोले पनि यसमा हिउदयाममा पानीको सतह घटने गरेको देख्न सकिन्छ । सदरमुकाम खलंगाबाट पैतलको यात्रा गरेपछि ३ घन्टाको यात्रा गरेपछि तालमा पुग्न सकिन्छ भने साना गाडी मार्फत १ घन्टामा तालमा पुन्ने गरेको सल्यानबाट आएका पर्यटक मिन बहादुर बुढाथोकीले बताए ।
मोटरसाईकलमा भने ४५ मिनेटको यात्रा पछी तालमा पुग्ने गरेको पर्यटनको अध्ध्यनमा लागेका भएका सगरमाथा आरोही मान बहादुर खत्रीले बताए । स्यार्पुतालाको वरिपरी सडक संजाल जोडिएको छ । सडक संजालका कारणले मानिसहरु वरिपरी गरेर अबलोकन गर्न सकिन्छ । साथै २ वटा भ्युटावर समेत स्थानीय सरकारको लगानीमा निर्माण गरिएको छ ।
भ्युटावरले पुरै स्यार्पुताल देख्न सकिन्छ । यसले गर्दा झन पर्यटकको मन लोभ्याउने गरेको संघीय राजधानी काठमाडौंबाट हेर्न आएका राजन उपाध्यायले बताए । स्यार्पूताल हेर्न आउने पर्यटकका निम्ति भनेर स्थानीय बिर बहादुर केसी र आदित्य कुमार मल्ले लगानीमा नयाँ आईटमको डुंगाको ब्यबस्था समेत गरिदिएका छन् । पर्यटक बस्नको निम्ति भनेर कर्णाली तथा बाफिकोट गाउपालिकाले पाहुनाघर समेत निर्माण गरिदिएको वडा नम्बर ३ का वडा अध्यक्ष चन्द्र बहादुर केसीले बताए ।
साथै स्यार्पुताल कृषि सहकारी संथाको लगानीमा डुंगा निर्माण गरिएको थियो भाद्र महिनामा बडी लोड भएर दुर्घटना भएको थियो मानबीय दुर्घटना भएको थियन ।पर्यटकलाई भित्र्याउनको निम्ति २०६७ साल असोज ११ गत्ते देखि १५ गत्ते सम्म स्यार्पू पर्यटन महोत्सब आयोजना गरिएको थियो । त्यस बर्ष देखि पर्यटकको बृदी भएको बताएको छ ्र स्यार्पुताललाई हरियाली पानि भनेर चिनिन्छ ।
जिल्ला बन कार्यालयको आयोजनामा स्यार्पुतालाको उत्तर साईटमा बनभोज घर र पश्चिम साईटमा महिला पुरुष शौचालय निर्माण गरिएको बताएको छ । स्थानीयहरुले आफ्नै लगानीमा बिभिन्न किसिमका होम स्टेय निर्माण गरेका छन । त्यस ठाउमा बस्न पर्यटकले मन लोभ्याउने गरेको स्थानीय यज्ञ चन्दले बताए ।स्यार्पुताल उत्तर साईटमा ताललाई जोगाउनको निम्ति कत्बन्धको निर्माण समेत गरिएको छ । तालमा पर्यटकलाई बढाउनको निम्ति सरकारले उदाहरनीय काम गर्दै आयको छ । रङ देखिने ताल कर्णाली प्रदेशकै प्रमुख पर्यटकीय तालको रुपमा चिनिन्छ ।
शहीदहरुको बलिदान बाट प्राप्त संविधानाइ रक्षा गर्न हामी संघर्षरत छौंः संघीय साँसद बस्नेत ४ माघ २०७७, आईतवार २१:०७
सिक्का इन्टरटेनमेन्टको प्रस्तुतिमा सत्यराज आचार्यको ‘म बाँच्नुको’ सार्वजनिक ४ माघ २०७७, आईतवार २१:०७
सल्यानको सल्लीबजारमा जडिबुटी सहित दुई ट्रक प्रहरी नियन्त्रणमा ४ माघ २०७७, आईतवार २१:०७
स्तरीय स्वास्थ्य सेवावाट कोहि नागरिक पनि बन्चित हुनु हुंदैन्ः मन्त्री ज्वाला ४ माघ २०७७, आईतवार २१:०७
रेडियो शारदा एफ.एम. सल्यान १३ औ बर्षमा प्रवेश ४ माघ २०७७, आईतवार २१:०७
सर्वोच्चको फैसलाले जनताको जीत भएको छः ज्वाला ४ माघ २०७७, आईतवार २१:०७
जेठ दोस्रो साताभित्रै एसईई सक्ने बोर्डको तयारी ४ माघ २०७७, आईतवार २१:०७
रुकुम पश्चिमको बाफिकोटमा आँखा सिबिर सम्पन्न ४ माघ २०७७, आईतवार २१:०७
संसद पुनःस्थापना भएकाे भन्दै सल्यानमा यसरी मनाइयाे खुशीयाली [फाेटाे फीचर ] ४ माघ २०७७, आईतवार २१:०७
संसद विघटन बदर गर्ने सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला ४ माघ २०७७, आईतवार २१:०७